Natsaannat Guddataa fiigicha wolakkaa maratoonii Vaaleensiyaa moo’attee - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Natsaannat Guddataa fiigicha wolakkaa maratoonii Vaaleensiyaa moo’attee
Natsaannat Guddataa fiigicha wolakkaa maratoonii Vaaleensiyaa moo’attee
Atleetonni Itoophiyaa wolmorkii Vaaleensiyaa 1ffaa - 3ffaa ta'aniiti kan galan.
Natsaanat Guddataa, umriin 24, walakkaa maratoonnii Vaaleensiyaa (km 21) injifachuudhan atleetii Itoophiyaa isii jalqabaa taateerti. Natsaannat Guddataa fiigicha sa’aa 1:07:30 kan xumurte.
Natsaannat Guddataa fiigicha kana moo’achuu qofa osoo hintaane rikoordii haarawas, sekondii 31’n fooyessuudhaan, galmeessisuu dandeetteerti.
Fiigicha wolakkeessa maratoonni Vaaleensiyaa kana atleetonni Itoophiyaa Worqinesh Dabalee fi Gannat Yaalew wolduraa duubaan 2ffaa fi 3ffaa ta’uudhan xumuraniiru.
Fiigicha wolakkeessa maratoonii Vaaleensiyaa kana irratti namoota hirmaatan kuma heddu keessaa 10,884, rikoordii haarawa, fiigicha xumuruu danda’aniiru.
Fiigicha worra dhiiraatiin atleetiin Keeniyaa Abrahaam Cherobeen kan, si’a2ffaaf wolitti aansee, injifateera.
Previous articleCheelsii, Man Yu, Arsenaalii fi Man Siitiin moo’atan. Riyaaliifi Baarseloonaan wolmorkii cimatti jiru
Next articleBaankiin Addunyaa imaammata bulchiinsa lafa magaalaa Itoophiyaa irratti qeeqa cimaa dhiheesse